SuperM အဖွဲ့ဝင်တွေလဲ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်အောင် တကယ်လုပ်ဆောင်ကြတယ်
SuperM အဖွဲ့ထဲက သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကြယ်ပွင့်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သီးသန့် အကြောင်းအရာတွေကို ရယူပြီးတော့ ကေ့ပေါ့ပ်ကြယ်ပွင့်တွေက ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုရှိအောင် ဘယ်လို တကယ်လုပ်ဆောင်ကြလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုလိုက်ပါ။
“ဒို့တွေတကယ် ကျန်းမာပျော်ရွှင်အောင် နေကြတယ်” အစီအစဉ်ကနေ သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကြယ်ပွင့်ကို ဖမ်းဆုပ်လိုက်ပါ
သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ကြယ်ပွင့်တွေအကြောင်း ပိုသိအောင် လေ့လာရင်း သူတို့နဲ့ ပိုပြီး နီးကပ်လာအောင် ခြေတစ်လှမ်းတိုးလိုက်ပါ။ ဒါတွေအပြင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ သီးသန့် အကလေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ကြည့်ရှုပြီး ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေအောင် သူတို့တွေ ဘာတွေ နေ့စဉ်လုပ်နေလဲဆိုတာ ရှာဖွေလိုက်ပါ။
အကောင်းမြင်စိတ်တွေနဲ့ နေထိုင်သွားဖို့ဆိုတဲ့ အချက်က သင့်ရဲ့ ၂၀၂၁ ပန်းတိုင်တွေထဲမှာ ရှိနေတုန်းလား? ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး BAEKHYUN ပြောတဲ့စကားကို ကြည့်ရအောင်! စိတ်ဖိစီးမှုဆိုတာ သူ့ကို နိုင်ဖို့မပြောနဲ့ esports ဂိမ်းပြိုင်ကွင်းတွေထဲက သူ့ ပြိုင်ဘက်တောင် မဖြစ်လာနိုင်ပါဘူးတဲ့။
အသစ်အဆန်း ကကွက်တစ်ခုခုများ ကြည့်ချင်လား? BAEKHYUN ရေ... ကကွက်တွေ ပြလိုက်ပါဦး။
သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေ မှန်မှန်ကန်ကန် အလုပ်လုပ်အောင် ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ? KAI လိုပဲ နေ့တိုင်း အချိန်မှန်မှန် အိပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
နေပါဦး... KAI က ဘယ်လို တစ်ကယ်လက်တွေ က,လည်းဆိုတာ ပြပါဦးမယ်။
အမြဲတမ်း တစ်နေရာတည်းမှာ တက်ကြွနေဖို့ပဲ ကြိုးစားရမှာလား? မဟုတ်ပါဘူး။ LUCAS ဆိုရင် ကပွဲကြမ်းပြင်ထက်မှာ လိပ်ပြာတစ်ကောင်လို ပေါ့ပါးသွက်လက်နေရုံတင်မက လက်ဝှေ့ကြိုးဝိုင်းထဲမှာလည်း အဆိပ်ဆူးနဲ့ ပျားတစ်ကောင်လိုပါပဲ။
ပရိသတ်ကြီးရေ... LUCAS ကတော့ ဒီလို က,တာပါနော်။
သင့်ရဲ့ ကျန်းမာပျော်ရွှင်ရေးကို ထိန်းသိမ်းထားချင်လား? MARK ရဲ့ အဆိုအရ ကောင်းကောင်း အိပ်စက်အနားယူလိုက်တဲ့ ညတစ်ညဟာ အရာအားလုံးကို ကုစားပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့။ MARK က စံပယ်ရနံ့ကို အနှစ်သက်ဆုံးဖြစ်ပြီး သူ ကောင်းကောင်းအိပ်စက်အနားယူနိုင်ဖို့ အစိုဓာတ်ထိန်းစက်မှာ စံပယ်ရနံ့ကို အသုံးပြုတတ်ပါတယ်။
MARK + သူ့ရဲ့ကကွက်ဆန်းတွေ = အံ့သြစရာပါပဲ။ သူ့ကကွက်တွေအတိုင်း လိုက်ကပါ၊ ပြီးတော့ သင့်ရဲ့ ကကွက်တွေကိုလည်း ပြပါဦး။
အမြဲတမ်း သန်မာပြီး ကျန်းမာသွက်လက်နေအောင် TAEMIN ဘယ်လို ဂရုစိုက်လဲ သိချင်လား? သူက နေ့တိုင်း squats ထိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းကို ၁၀ မိနစ်လောက် အမြဲ လုပ်ပါတယ်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းက လွယ်တယ်၊ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်၊ ပြီးတော့ ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် သူလုပ်နိုင်တယ်လေ။
TAEMIN က pre-chorus မှာ သူ့ရဲ့ကကွက်တွေကို ဘယ်လို အမျိုးမျိုးသုံးပြီး က,သွားလည်းဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦး။
အမြဲ သတိကောင်းဖို့ ဘယ်လိုစပြီး လေ့ကျင့်ရမလဲဆိုတာ တွေးဖူးလား? စိတ်ကြည်နူးချမ်းမြေ့စရာ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ TAEYONG ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်က Ennio Morricone ရဲ့ ဟိုးအရင်က ဂန္ဓဝင်တေးသီချင်းကောင်းတွေကို နားဆင်တာပါပဲတဲ့။
#WeDO သီချင်းသစ်မှာ TAEYONG ကို ဘာက စိတ်လှုပ်ရှားစေခဲ့တာလဲ? ကျွန်တော်တို့အားလုံး ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ခံစားသက်ဝင်နိုင်စေတဲ့ အခွင့်အရေး ရှိနေလို့ပါ။
စိတ်ဓာတ်ကျတဲ့ အချိန်ဖြစ်ဖြစ်၊ အထီးကျန်သလို ခံစားရတဲ့ အချိန်ဖြစ်ဖြစ် သင် ဘာလုပ်တတ်လဲ? TEN ရဲ့ အကြံပေးချက်ကတော့ လက်တစ်စုံကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်ဖို့ပဲ လိုပါတယ်။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် ဆူရှီတွေ လိုက်ထည့်ပေးနေတဲ့ လက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တဲ့။
SuperM ရဲ့ #WeDo သီချင်းဗီဒီယိုအသစ်ကို ကြည့်ပြီးကြပြီလား? TEN ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ သတိပေးသံလေးကို နားဆင်ကြည့်ပါဦး။